Waaheen Media Group » Qisadii ninkii boqolka qof dilay – Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay
Browse:Home Radio Waaheen Qisadii ninkii boqolka qof dilay – Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay
Qisadii ninkii boqolka qof dilay – Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay
Published by Waaheen Media on June 18, 2017 | Comments Off on Qisadii ninkii boqolka qof dilay – Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay
Diinta Islaamku waa diinta rajada. Diinteena qofku si kasta oo u albaabka rajada kama xirto. Qisada maanta ee qisooyinka uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay waa qiso ku raja galinaysa qof kasta oo xaqa Allah garan waayay. Fadlan daawo siina gudbi hadaad awoodo.
Filed in: Radio Waaheen, Waaheen News